IMazinaw Cottage kwiNduli
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAlexia
Nceda uqaphele: Ukubhuka kwehlobo phakathi kwe-24 kaJuni - 2 Septemba 2022 kukho ubuncinane ubusuku obusi-7 kwaye konke ukubhukisha kufuneka kuqale ngoLwesihlanu ukuya ngoLwesihlanu.
I-4 Season Cottage elala i-8. 2 imiz ukusuka ekungeneni kwe-Bon Echo Provincial Park kwaye ngaphesheya kwesitalato ukusuka kwiLake laseMazinaw. Kwinduli, ejikelezwe yimithi yepine, enombono omhle wechibi kunye ne-marina. I-intanethi yesantya esiphezulu inikezelwe. *Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga
Ikhaya elipholileyo lokungena elinendawo yokulala yabantu abayi-8 ebandakanya iibhedi ezi-2 zokumkanikazi, iseti yeebhanka ezingatshatanga kunye nenkosikazi ekhupha ibhedi. I-Pack 'N Play okanye i-matrasi yomgangatho omncinci iyafumaneka xa iceliwe kwiintsana okanye abasakhasayo. Umngangatho ojikelezayo unika indawo eninzi yokuphumla ngombono omangalisayo wechibi laseMazinaw kunye ne-marina ngokusebenzisa ipines ezinde.
Umgangatho ongaphantsi ngoku usalungiswa kwaye awuvulelwanga iindwendwe.
Ukudlula kosuku kwiPaki yePhondo yaseBon Echo kubonelelwe ngeendwendwe. I-Bon Echo ibonelela ngokunyuka intaba, ukuqubha, ukurentisa kwezemidlalo emanzini angeyomoto, ukuqaliswa kwesikhephe, kunye nokhenketho lwesikhephe ukuya eludongeni lwamatye. Ukujonga inkwenkwezi kuyamangalisa kwindawo kwaye akukho ngcoliseko lukhanyayo.
Ngaphesheya kwesitrato ukusuka kwindlwana, iSmarts Marina ibonelela ngevenkile eluncedo, i-ayisikrimu, kwaye ihlala ibonelela ngerenti yezikhephe ngexabiso elifanelekileyo. **Ukurenta izikhephe akubonelelwa ngesizini ka-2020 ngenxa ye-COVID.
Sinikezela ngesiliphu sephenyane kuzo naziphi na iindwendwe ezizisa isikhitshane sazo **Iimeko kunye neentlawulo ziyasebenza** Umnini marina ukwavumile ukuvumela iindwendwe ukuba zindulule amaphenyane abo, iibhodi zokubhexa kunye neekayak ukuba zinokuthwalwa ukuwela isitalato.
Ebusika, iindwendwe zinokonwabela ukukhwela ikhephu kunye nokutyibilika ekhephini ngokunqumla ilizwe kwipaki yephondo kunye nokuloba umkhenkce echibini. Indlu encinci isecaleni kwe-snowmobile loop E101.
Umbuki zindwendwe ngu- Alexia
I-Keyless, i-self check in. Abamkeli bakho bafumaneka 24/7 ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho.